နွေရာသီအတွက် အလှဆုံးအရောင်စုံ Shoe ဖိနပ်လေးများ – FemaleWear.net
နွေရာသီအတွက် အလှဆုံးအရောင်စုံ Shoe ဖိနပ်လေးများ
ဆောင်းရာသီကုန်လို့ နွေရာသီဘက်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်လို့ ရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Fashion လေးတွေကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ကြရပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ Quality ကောင်းကောင်းဖိနပ်လေးတွေကို ရွေးချယ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်နော်။ တချို့ brand ကျလည်း စျေးအရမ်းကြီးသလို၊ စျေးသိပ်မရှိတဲ့ ဖိနပ်လေးတွေလည်းပါဝင်လို့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒီ shoe လေးကတော့ အရောင်စုံလေးဖြစ်လို့ နွေရာသီနဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဖိနပ်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ vintage-look လေးဖြစ်လို့ အဝတ်စားမျိူးစုံနဲ့လိုက်ဖက်ပြီး low heel ဖြစ်တာကြောင့် ခြေထောက်နာမှာလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
အစိမ်းရင့်ရောင်အကွက်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ Talbots ရဲ့ဖိနပ်လေးကတော့ ဒီနှစ်နွေရာသီအတွက် မိန်းကလေးအများစုကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ ဖိနပ်တရံဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ Talbots brand ကထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Colorful ဖိနပ်လေးတွေ ရွေးချယ်ထားတာကြောင့် အရောင်စုံနဲ့လှပတဲ့ဖိနပ်လေးတွေထဲမှာ Topshop ရဲ့ Joice Woven Mid Heel Court Shoes လေးကလည်း ပါဝင်နေပါသေးတယ်။ Topshop လေးတွေဟာ စျေးလေးတွေလည်း သင့်တာကြောင့် လူတိုင်းသုံးစွဲနိုင်တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်စရာ Shopbop ရဲ့ ဖိနပ်လေးကတော့ တောက်ပပြီးလှပနေတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးကြောင့် မိန်းကလေးတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ metallic leather ကြိုးလေးတွေကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဖိနပ်လေးတရံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
H&M ရဲ့ Satin Sandal လေးကတော့ စျေးနှုန်းလည်း သင့်တော်ပြီး အရည်သွေးလည်းကောင်းတာကြောင့် လူတိုင်းသုံးနိုင်တဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားပါ။ H&M ကဖိနပ်လေးတွေကလည်း မေ့ထားလို့မရဘူးနော်။
ဒီ ဖိနပ်ဒီဇိုင်းလေးကို Shopbop မှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး နွေရာသီနဲ့အထူးသင့်တော်တဲ့ ဖိနပ်ပုံစံလေးပါ။ Shoe ဒီဇိုင်းလေးကလည်း ထိပ်ပြားလေးမို့ ခြေချောင်းလေးတွေလည်း နာမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
Woww ဘယ်လောက်တောင်လှတဲ့ ဖိနပ်လေးလည်း အရောင်လေးတွေစိုပြီး လှလိုက်တာက လက်လန်တယ်။ စျေးကလည်း ၂သိန်းနီးပါး…
ဒါလေးကလည်း အနီရဲရဲလေးနဲ့ ဘယ်လောက်လှတဲ့ ဖိနပ်လေးလဲ။ Heel လေးကလည်း အထူလေးမို့ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှာပါ။ စျေးကတော့ $164.95 ဆိုတော့ နည်းနည်းကြီးလို့ လှပေမယ့်လည်း….
ချစ်စရာအရောင်လေးနဲ့ မနိမ့်မမြင့်ဒေါက်လေးမို့ နေ့စဉ်စီးလို့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ ဖိနပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူလေးကလည်း နွေရာသီမှာစီးလို့လှမယ့် ဖိနပ်လေးတရံပါ။
Zara ရယ် ဘယ်လိုတောင် ထွင်လိုက်ပြန်တာလဲ? နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးကြိုက်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်လို့ ဘယ်ချိန် sold out ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ မြင်ယောင်မိပါသေးတယ်။
Gigi Hadid နှင့် သူတွဲခဲ့သောဘဲများ
တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ သားမွှေးတွေအသုံးပြုခြင်းကို ရပ်လိုက်တော့မယ့် VERSACE